Soosaarayaasha kuleylka soosaarayaasha hawo soosaarayaasha - shiinaha shiinaha bamka kululaynta warshadda hawo soosaarayaasha & alaab-qeybiyeyaasha
Nidaamka kuleylka kuleylka ee lagu buuxiyo si loo gaaro soo kabashada tamar badan iyo waxtarka sare; Waxay u toosin kartaa inay tahay qaboojiye cusub xilliyada macaamil ganacsi, lamaane wanaagsan oo leh nidaamka qaboojiyaha; Xakamaynta joogtada ah iyo uumiga hawo nadiif ah, oo leh xakamaynta isku-ururinta CO2, gaaska waxyeellada leh iyo nadiifinta PM2.5 si hawo nadiif ah looga dhigo mid raaxo leh oo caafimaad leh. Feature ee Vertical Nooca Heerka saar Tamarta Heat Recovery Ventilator:
Nidaamka hawo soosaarida tamarta kuleylka tamarta ee saqafka
Horumarinta dhaqaalaha, isticmaalka culus ee dhuxusha iyo shidaalka si loo soo saaro boodhka, kaarboon laba ogsaydhka, baaruud dioxide iyo walxo kale oo waxyeello leh, taas oo horseedda cimilo aan caadi ahayn, wasakhda hawada ee daran, waxay si aad ah u kordhisay uruurinta walxaha yaryar (PM2.5). Waxay si dhab ah u saameynaysaa shaqadeena, nolosheena iyo caafimaadkeena. Marka loo barbardhigo isweydaarsiga hawo-dhaqameedka cusub, hoos ayaa ah faa'iidooyinkeenna: 1.The labada heer-soo kabashada kulaylka nidaamka la bamka kuleylka iyo ku-beddelaha kuleylka hawada. 2.Flatlatio wasakh ...